सुत्नेसमयमा भोलीको दिन तपाइको लागि कस्तो रहला - Muldhar Post
दैनिक राशिफल २०७७, २१ चैत्र शनिबार 609 पटक हेरिएको
भोली मिति २०७७ साल चैत्र महिनाको २२ गते आइतबार रहेको छ । मेष राशि : ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) गर्भवती आमाको लागि राम्रो दिन होइन। तपाईं हिड्दा धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ। आफ्नो जीवन साथीको लापरवाहीले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। आफ्नो बहुमूल्य समय खर्च गर्नुहोस् र आफ्ना खुसीका सुनौला दिनहरू पुनः प्राप्त गर्न आफ्ना रमाइला सम्झनाहरु याद गर्नुहोस्। आज तपाईंलाई प्रेमको वरदान प्राप्त हुने देखिन्छ। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधार गर्ने कामहरूको लागि प्रशस्त समय हुनेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि सही दिन। आफ्नो घरमा एकता ल्याउन नजिकै समन्वयमा काम गर्नुहोस्। तपाईंका आँखा आफ्नो प्रेमीको अँध्यारो रातलाई प्रकाश गर्न सक्ने उज्ज्वल छन्। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। निस्वार्थ सेवामा आफ्नो खाली समय समर्पित गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई र तपाईंको परिवारलाई खुशी र अथाह आनन्द दिन्छ। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। तपाईंको प्रेमी जीवनले आज सुन्दर रूप लिनेछ। तपाईंले प्रेममा हुनुको स्वर्गीय भावना प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई खिचलो बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू आउनेछन् र लामो अवधिसम्म पनि तपाईंको सम्बन्ध राम्रो नहुन सक्छ।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) आराम महत्त्वपूर्ण भएको दिन – हालैमा तपाईंले धेरै मानसिक दबाबको सामना गर्नुभएको छ – त्यसैले मनोरञ्जन र आमोद-प्रमोदले तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत गर्नेछ। कुनै घोर अपराध गर्नुहोस्। तपाईंलाई यो शान्ति कायम र . हटाउन आवश्यक छ साँझको लागि विशेष केहि योजना बनाउनुहोस् र यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आजभोली कुनै खुशी छैन; आफ्नो जोडीसँग कुरा गर्नुहोस् र साँच्चै रमाइलो केही योजना गर्नुहोस्।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) हृदयरोगीहरूलाई कफी छोड्ने सही समय हो। कुनै पनि बढी प्रयोगले तपाईँको हृदयमा अनावश्यक दबाब पार्नेछ। तपाईंले मित्रहरूबाट सहयोग पाउनुहुनेछ – तर सावधानीसँग बोल्नुहोस्। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। आकस्मिक परिचितहरूसँग आफ्ना व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगर्नुहोस्। कार्डमा रोमान्स छ तर इन्द्रियका भावनाहरू प्रकट हुनाले तपाईंको सम्बन्ध बिगार्नेछ। तपाईंको जोडी आज तपाईंको स्वास्थ्यलाई लिएर असंवेदनशील हुन सक्छ।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्नुहोस् र सकेसम्म छिट्टै डरबाट छुटकारा हुनुहोस्, किनकि कार्डमा स्वास्थ्यमा तत्काल प्रभाव पर्ने र राम्रोसँग स्वास्थ्यको आनन्द लिने तपाईंको बाटोमा रहेको अवरोध बढ्ने सम्भावना छ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकावले बेलुकीतिर तपाईंको मन ढाक्नेछ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) सांझ चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। प्रेम मामिलामा सशक्त नहुनुहोस्। तपाईंको व्यस्त तालिकाको कारण तपाईंको जोडीले आज आफुलाई महत्वहीन महसुस गर्न सक्छ, र साँझमा अप्रसन्न भएको देखाउन सक्छ।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। आज तपाईंले आफ्नो प्रियलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न असमर्थ हुनुहुनेछ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।